सञ्जनाका दाई भन्छन्- ‘अब तिहारमा कोसँग टीका थापौंला’ – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारसञ्जनाका दाई भन्छन्- ‘अब तिहारमा कोसँग टीका थापौंला’
सञ्जनाका दाई भन्छन्- ‘अब तिहारमा कोसँग टीका थापौंला’
दाङको पब्लिक ज्ञानज्योति स्कुलमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत सञ्जना केसीको मंगलबार एकाबिहानै स्कुलबस दु’र्घटनामा मृ’त्यु भयो। कम्प्युटर साइन्स पढिरहेकी सञ्जनाको विद्यालयकै बस दु’र्घटना परी मृ’त्यु भएको हो। त्यसको पीडा घर, परिवार र आफन्तमा बढी हुन्छ नै।
सञ्जनाकी आमा माया केसीलाई बुधबार बिहान १० बजे फोनमा कुरा गर्न खोज्दा बोल्न सकिनन्। मायाले रूँदै यत्ति बोलिन्, ‘खै, मेरी छोरी, कहाँ लगिदिए।’ घटना सुनेदेखि नै रूँन सुरू गरेकी मायाको अहिले पनि आँखा ओभानो भएको छैन। सञ्जनाका बुवा ढकबहादुर केसी वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा कतारमा छन्।
गत माघमा उनी विदेश गएको दुई वर्ष पुग्यो।छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउन विदेशीका ढकबहादुर छोरीको मृ’त्युको खबर विक्षिप्त छन्। उनी नेपाल फर्किने तयारी गरिरहेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ गणेशपुरकी सञ्जनाले बिजौरीस्थित लिटिल फ्लावर स्कुलबाट एसइई गरेकी हुन्।
२१ वर्षीय दाजु प्रवीणका अनुसार सञ्जनाको चाहना एक असल शिक्षक बन्ने थियो। ‘म असल शिक्षक बनेर गाउँ समाजमा शिक्षाको ज्योति छर्छु भन्ने गर्थी,’ प्रवीणले भने, ‘निष्ठुर दैवले मेरो बहिनीको सपना पूरा हुन दिएन।’ पढाइमा अब्बल उनी सुशील र सरल स्वभावकी थिइन्।
सधैं बिहान ४ बजे आफ्नी आमासँगै उठ्थिन्। उनी बिहान उठ्नासाथ हरेक दिन पूजा पाठ गर्थिन्। घर अगाडि आँगनमा रहेको तुलसी मैरा (तुलसीको बोट) मा बिहानै जल चढाउँथिन्।‘बहिनी सधैं मम्मी सँगै उठ्थी। मम्मीले भैंसी दुहुने लगायत घरायसी काम गर्नुहुन्थ्यो र बहिनी आफ्नो पूजा आराधना सुरू गर्थी,’ दाजु प्रवीणले भने, ‘अब बिहानै उठेर उसलेजस्तै सानो घन्टी बजाएर पूजा आराधना कसले गरिदेला!’
दाजु प्रवीणका अनुसार उनकी बहिनी सञ्जना निकै सहयोगी थिइन्। मम्मीलाई घरको हरेक काममा सघाउँथिन्। आफ्नी मम्मीको सुख दुःखको एक्ली साझेदार उनै थिइन्। ढकबहादुर र मायाबाट सन्तानका रूपमा परिवारमा दुई दाजुबहिनी मात्रै हुन्। प्रवीण पनि काठमाडौंमा ब्याचलर अध्ययरत छन्।उनी घरायसी कामले गर्दा केही दिन पहिल्यै मात्रै घर आएका रहेछन्।
‘अब चाडपर्वमा म के गरूँला,’ प्रवीणले भने, ‘तिहारमा अब म कोसँग टीका थापौंला।’ घटना भएको दोस्रो दिन बिहानै गाउँमा स्कुल बस पुगेको देख्दा आफू एकान्तमा खुबै रोएको प्रवीणले बताए। ‘आज मैले बिहानै जब गाउँमा स्कुल बसहरू आएको देखेँ, म बिहानै रोएर बसेँ,’ प्रवीणले भने, ‘मेरी बहिनी पनि हुँदो हो त अरूजस्तै बसमा कलेज जाने थिइन् होला भनेर कल्पेर रोएँ।’
अघि-पछि बहिनी बस चढेको देख्दा हात हल्लाउने उनी आज भने चुपचाप रोएर बसेको बताए। घटनाको बिहानमा मम्मीले नै आफूलाई घटनाबारे जानकारी दिएको बताए। ‘नानीको बस दुर्घटनामा पर्‍यो भन्ने कुरा गर्छन्, ए बाबु तँ छिटो उठ, भनेर मम्मी दौडिएर जानु भयो,’ प्रवीणले घटनाको बिहान सम्झिए, ‘अनि म पनि दौडिएर घटनास्थल पुग्दा त्यहाँ पल्टिएको बस मात्रै थियो।
बहिनीलगायत सबैलाई तुलसीपुर पुर्‍याइसकेका रहेछन्।’ माया छोरीको अवस्था बुझ्न तुलसीपुर पुगिसकेकी थिइन्। केहीबेरमै प्रवीणलाई बहिनीको मृ’त्युको खबरले टेकेको जमिन भासिएझैं लाग्यो। प्रवीणले दुर्घटनास्थल पुग्दा बस तीव्र गतिमा थियो भन्ने कुरा सुने ।अघिपछि भन्दा बस उक्त दिन अलि ढिला गरी आएको हुँदा चालक आत्तिएर तीव्र गतिमा चलाउँदा दुर्घटना भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। बहिनीको किरिया उनका ठूला बुवा मिनबहादुर केसी बसेका छन्।
फरार चालक सरोज विक २४ घन्टापछि पक्राउ परे-पब्लिक ज्ञानज्योति स्कुल बसका चालक दुर्घटनाको २४ घन्टापछि पक्राउ परेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ बन्नै निवासी २८ वर्षीय चालक सरोज विकलाई बुधबार बिहान करिब ८ बजेतिर सोही वडाको पर्सेनी क्षेत्रबाट पक्राउ परेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी शिवबहादुर सिंहले जानकारी दिए।
चालक विकको दायाँ हातमा सामान्य चोट देखिएको डिएसपी सिंहले बताए। गाउँमा कलेजका विद्यार्थी लिन गएको रा १ क ४३३ नम्बरको बस तुलसीपुर १६ सरैया चोकमा दुर्घटनामा परेपछि चालक विक फरार थिए। पक्राउ परेका चालक विकले प्रहरी समक्ष गाडी चिप्लिएर दुर्घटनामा परेको बयान दिएको डिएसपी सिंहले बताए।
उनले प्रहरी समक्ष गाडी स्पिडमा नरहेको र चिप्लिएर दुर्घटना भएको हुँदा स्टेरिङले काम नगरेको हुन सक्ने दाबी गरेको डिएसपी सिंहले जानकारी दिए। तर, घाइते विद्यार्थीले भने तीव्र गतिका कारण बस दु’र्घटनामा परेको जानकारी दिएका छन्। विद्यार्थी तथा गाउँलेले आक्रोसित भएर आफूमाथि कुटपिट गर्न सक्ने डरले ज्यान जोगाउन आफू भागेको बयान प्रहरी समक्ष दिएका छन्।
तुलसीपुर बजारस्थित पब्लिक ज्ञानज्योति कलेजबाट तुलसीपुर १६ स्थित सरैया गाउँमा विद्यार्थी बोकेर फर्केंदै गरेको विकले चलाएको रा १ क ४३३ नम्बरको बस मंगलबार एकाबिहानै दुर्घटनामा परेको थियो। उक्त दुर्घटनामा परी तुलसीपुर १६ की १८ वर्षीय सञ्जना केसीको मृ’त्यु भएको छ भने थप २९ विद्यार्थी घाइते भएका थिए।
घाइतेमध्ये १७ वर्षीय किरण चौधरीको काठमाडौंमा, १७ वर्षकै रोमहर्ष भण्डारी र २० वर्षीया अस्मिता डाँगीको बाँकेमा उपचार भइरहेको डिएसपी सिंहले जानकारी दिए। अन्य सबै घाइते उपचारपछि डिस्चार्ज भई घर फर्किसकेको प्रहरीले जनाएको छ।